सृष्टि र सौगात भिड्दै « Ramailo छ
सृष्टि र सौगात भिड्दै
नायक सौगात मल्ल र मिस नेपाल समेत रहेकी नायिका सृष्टि श्रेष्ठ लभ अफयेरमा छन् । गएको केही वर्षदेखि सौगात र सृष्टि प्रेममा रमाई रहेका छन् । ओपन रिलेसनसिपमा रहेको यो प्रेम जोडीको अब भने आपसी प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । कसरी त ?
फिल्म ‘रोमियो एण्ड मुना’ र फिल्म’ पञ्चेबाजा’ एकै मितिमा प्रदर्शनमा हुने भएपछि सौगात र सृष्टिबिच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो । सृष्टिको ‘रोमियो एण्ड मुना र सौगातको पञ्चेबाजाले फागुन ११ गते प्रदर्शन मिति तय गरेका छन् । यी दुवै फिल्मले एक एक वटा गीत समेत सार्वजनिक गरेका छन् । प्रेम जोडीको प्रतिस्पर्धामा कसले बाजी मार्ला ? या समझदारीमा दुई मध्ये कुनै एक फिल्म पछि हटलान् ? सृष्टिसँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :